Muuri News Network » Midowga Yurub oo 12-Milyan oo Dollar Ugu Deeqay Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya+Muuqaal
Midowga Yurub oo 12-Milyan oo Dollar Ugu Deeqay Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya+Muuqaal
Wafdi uu hogaaminayo Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya uuna ku wehliyo Wasiirka Qorsheynta Qaranka Soomaaliya ayaa maanta gaaray Magaalada Baydhaba ee xarunta Gobolka Baay.
Wafdiga ayaa kulamo ay la qaateen madaxda maamulka Koonfur Galbeed kadib waxaa ay deeq lacageed oo $12 milyan oo
doollar ah ku wareejiyeen maamulka Koofur Galbeed taas oo lagu qabanayo Mashaariic lagu taageerayo in ka badan 200,000 oo qof oo ah dadka danyarta ah ee ku nool halkaasi.
Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka Caalamiga ah ee maamulka Koofur Galbeed C/naasir Caruushe oo xag ku haysta Gobolka Shabellaha Hoose oo kulanka kadib la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ee Federaalka iyo Maamulka Koonfur Galbeed ay isla hubin doonaan hanaanka loo adeegsado lacagtan iyo in lagu qabtay wixii loogu talagalay.
Waxaa uu Midowga Yurub uga mahad celiyay deeqda lacageed ee ay ugu talagaleen dadka danyarta ah ee ku nool maamulka Koofur Galbeed.
Sidoo kale, madasha lacagta loogu deeqayay Maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya waxaa goob joog ahaa Ra’iisal wasaaraha Xukuumada Soomaaliya C/rashiid Cali Sharmarke iyo Waliba Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga C/raxmaan Ceynte,iyo iyo Waliba Wasiirk naafada Cabdullahi Muuse kuwaasi oo hadalo kooban ay jeediyeen ku amaanay Howsha Midowga Yurub ee Soomaaliya ka hayo.
C/raxmaan Ceynte Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya ayaa sheegay in lacagta $12 milyan ee ku aaday maamulka K/galbeed Soomaaliya loogu magacdaray ubabac dhigida aafooyinka,waxaana si gaar ahaa lacagtaasi loogu talagalay in wax loogu qabto dadka inta badan u nugul dhibaatooyinka sida Carruurta iyo Haweenka iyo dad kale ee daruufaha kala duwan dhanka nolosha heystaan.